Boob iyo kala amar qaadasho la’aan ka socota Baydhabo | KEYDMEDIA ONLINE
Boob iyo kala amar qaadasho la’aan ka socota Baydhabo
Musharixiinta laga hor istaagay baratanka kuraasta ayaa la filayaa in ay maalmaha soo socda sameystaan kutlad mideysa, si ay is-gaashaan-buureysi ugu raadsadaan xaqooda.
BAYDHABO, Somaaliya - Guddiga Maamulka Doorashada heer Koonfur galbeed (SEIT), ayaa gaashaanka u duruuray, waraaq ka soo baxday Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federal (FEIT), taas oo guddoonka iyo guddiga doorashada Koonfur Galbeed la gu faray in la joojiyo qabashada doorashada kursiga tirsigiisu yahay HOP103.
Warka FEIT, waxaa lagu xusay in amarka hakinta doorashada kursiga uu soconaayo inta guddigu ka xallinayo tabashooyinka ka soo yeeraya habraaca loo maray, kaas oo tabasho xooggan uu ka keenay Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Guddoomiyohii hore ee Golaha Shacabka.
Hayeeshee, Guddoomiyaha Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka DGKG, Yuusuf Cabduqaadir Maxamed Baafo oo shir Jaraid qabtay ayaa sheegay in FEIT, ayasan hor istaagi karin doorashada HOP103. “Cirro wax sharciyad uma heysto joojinta kursigaas”. Ayuu yiri.
Sida ay xoguhu caddeynayaan, Madaxweynaha KG, ayaa kursigaan saacadaha soo socda u boobaya Wasiirka howlaha guud ee Koonfur Galbeed Maxamed Cali Xassan, oo ka mid ah musharixiinta Kooxda Farmaajo u gudbiyeen Lafta-gareen.
Ra’iisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble oo shalay kulan la yeeshay Guddiga Xallinta Khilaafaadka iyo Guddoonka Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal, ayaa ku boorriyay in ay ka madax bannaanaadan horjoogayaasha dowlad-goboleedyada, taas oo u muuqata mid aan hirgal noqon karin.
Fowsiya Maxamed Sheekh, ayaa mar kale shalay ku guuleystey Kursiga Nambarkiisu yahay Hop 171, Aadan Maxamed Nuur (Saran-soor) ayaa sidoo kale ku guuleystey Kursiga Hop 170 halka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, uu mar kale, dib ugu laabtay Golaha shacabka.
Dhanka kale, amni-darro xooggan ayaa soo food saartay Baydhabo, Kooxda Al-Shabaab ayaana madaafiic la dhacday xarunta madaxtooyada, garoonka diyaaradaha, xerada ugu weyn ee Ciidanka Itoobiya iyo xarumo kale, xilli lagu guda jiray doorashada kuraastii ugu horreysay ee Golaha shacabka shalay.
Kooxda Farmaajo, ayaa codadka ugu badan ka sugeysa KG, waxaana Baydhabo ku sugan saraakiil ka wakiil ah Fahad iyo Farmaajo.
Doorashooyinka guud ayaa ku billowday boob xooggan, taas oo sababtay in ay mar kale, laba kacleyso saxmadda siyaasadeed ee dalka.
Kulamo kala duwan ayaa caasimadda ka socda oo ay ugu miisaan culus yihiin kuwa Midowga Musharixiinta, kuwaas oo qaadacay natiijada kuraasta la boobay.